Ahoana no fomba fihinanana sakafo mahasalama mandritra ny vanim-potoana areti-mifindra? - Ne gerekir?
voavahaFomba fijery 9.94K 30 / 12 / 2021 Mamaly ny fanontanianao rehetra momba ny fahasalamana eto izahay! Manana dokotera manana mari-pankasitrahana avy amin'ny birao izahay hamaly fanontaniana ara-pitsaboana mba hahazoanao ny fikarakarana ilainao.
Fantatrao fa tena mipetrapetraka izahay ary mivadika sakafo mahasalama. Ka aza mba manome sosokevitra fotsiny. Andao hampiharina izany. Milaza zavatra handresena lahatra ny tenantsika. Tetika, fomba sns. Satria miady amin'ny ady ara-tsaina lehibe isika.
Mihidy amin'ny valiny vaovao ny fanontaniana.
Ne Gerekir Niova ho saika havoaka ny satan'ny 30 / 12 / 2021
Ilay zokiny indrindra
Ibrahim Huseyin Cevik55 Navoaka tamin'ny 07/05/2021
Fiainana salama mandritra ny fizotran'ny aretina
Salama Ramatoa Lale, ireto misy fomba mahomby hiarovana ny fahasalamantsika mandritra ny vanim-potoana areti-mandringana;
💧 Misotro rano alohan'ny hisakafoanana
Alohan'ny hisakafoanana dia tokony hikarakara tsara ianao hisotro rano iray vera. Tokony handany rano be koa ianao amin'ny antoandro. (Ny habetsaky ny rano ilain'ny olona mahazatra dia 2-3 litatra.)
Ny rano dia miantoka ny fiasan'ny rafi-pandevonan-kanina matetika.
Mampihena ny fahatsapana hanoanana.
Manampy amin'ny fanalefahana ny adin-tsaina sy ny fihenjanana ary ny fahaketrahana.
Izy io dia mitondra otrikaina sy oksizena mankany amin'ny sela.
Manafaingana ny fandraisana ny mineraly, vitamina ary otrikaina hafa izy io.
Mampitombo ny elastika amin'ny hoditra amin'ny fanamboarana ny sela hoditra. Izany dia miteraka mamirapiratra sy mamiratra kokoa amin'ny hoditra. Manampy ny volo ho malemy kokoa sy mamiratra koa.
Fanamarihana: Raha mihoatra ny filàn'ny rano be loatra ianao dia mety hanapoizina rano.
🍞 Fampihenana ny ampahany amin'ny lalana mety
Ny vatantsika dia maniry hatrany ny hanohizantsika amin'ilay ampahany mahazatra.
Ohatra; Miara-misakafo maraina miaraka amina mofo 8 isan'andro isika. Mila mandanjalanja ny gliosida, siramamy ary proteinina azontsika amin'ny mofo isika mba hampihenana azy tsara.
Akondro: Sady gliosida mora hanina no voankazo tena mahasoa.
Lentil: Ny lentil, izay isan'ireo gliosida kalitao, dia misy proteinina 120 grama isaky ny 18 grama.
Oat: Manome ny tahan'ny kaloria sy gliosida ilain'ny vatanao izy io. Mampihena ny kolesterola koa izy io.
Atody: Ny vokatra azontsika miaraka amin'ny proteinina 13 grama eo ho eo
Hena matavy ambany: Loharano manan-danja amin'ny vitamina B sarotra toy ny Thiamine, Riboflavin, Niacin, Biotin, B6, B12, asidra Pantothenic, Folacin. Izy io koa dia sakafo tena tsara ho an'ny Iron, Zinc, Manganese.
Yoghurt: Izy io dia sakafo misy otrikaina maro toy ny gliosida, proteinina, lipida, mineraly ary vitamina.
Amin'ity karazan-tsakafo ity dia afaka manolotra safidy voajanahary ho an'ny tenantsika isika.
Eto aho dia tokony hampahatsiahy anao fa; "Ny loha salama dia ho ao amin'ny vatana matanjaka."
Ny dia an-tongotra 1 ora isan'andro dia hihazona anao ho salama sy ho salama. (Angatahinay ianao hanaraka ny ora maro ivelan'ny ora tsy ahafahana mivezivezy.)
Tsy milaza izahay fa tokony handeha an-tongotra any ivelany tokoa ianao. Azonao atao ny manao fanazaran-tena izay hanampy anao hahatsapa tena tsara ao an-trano toy ny yoga, fanatanjahan-tena ary fisaintsainana.
Arangi Ianao koa te handre momba ireo fomba ahafahanao mandresy lahatra ny tenanao hampihatra izay atolotray. Ka ny nosoratanay dia valiny fohy amin'ny fanontanianao. Hiverina aminao izahay miaraka amin'ny lahatsoratra amin'ny antsipiriany ato ho ato! 😊
Ne Gerekir Fanamarihana novaina 09 / 08 / 2021
Lale Yuksel naneho hevitra 08 / 05 / 2021
Misaotra İbrahim Bey 😊
Antontan'isa momba ny fanontaniana
active 30 / 12 / 2021
Fanontaniana voavaly farany
Fizarana valiny haingana